ကွမ်းကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက် ကျောက်ကပ်ကျောက်ကြေ ဆေးနည်းလေး မျှဝေပေးလိုက်တာပါ – Shwe Myanmar
ကွမ်းယာစားသူရော ကွမ်းဟာမစားသူတွေအတွက်ပါ ရည်ရွယ်ပြီး ဒီဆေးနည်းလေး ပြန်လည်မျှဝေပါရစေ။ ကိုယ်တွေ့ပျောက်ကင်းသူရဲ့ ပြောပြချက်အရ ဆေးနည်းကကောင်းတယ် ဆေးအနေနဲ့က လွယ်ကူတယ်။ စစ်ကိုင်းမြို့ရွာထောင်မီးရထားရပ်ကွက်က ကိုစိုးပိုင်ဆံသ ဆိုရင် မသိသူ နည်းပါးပါမယ် သူကိုယ်တိုင်ကလည်း
ဗမာဆေးကို တစိုက်မတ်မတ်ဖော်စပ်နေသူတစ်ဦးပါ။ ဆေးဝါးကုသတာ ဝါသနာထုံသူမို့ ကျောက်ကပ်ကျောက်တည်သူ ကိုကျော်သူရဲ့ကိုယ်တွေ့ ကျောက်ကပ်ကျောက်တည်ခြင်းမှ ခံစားခံရတဲ့ဒုက္ခကနေ သက်သာခဲ့တဲ့ဆေးနည်းလေး လာရောက်မျှဝေပေးခဲ့ပါတယ် ။ ခံတက်ခေါက်နှင့်ဗမာသံပုရာသီးအစစ် ကို အရည်ညှစ်ပြီး
စတီးဇွန်း တစ်ဇွန်းစာသွေးသောက်ပါ ဆီးကနေ … ! ကျောက် ကြွေကျလာတာ၃လုံးခန် ရကြောင်း အကြီးဆုံးကျောက်ကို ဆေးနည်းပြောရအောင် သိမ်းဆည်းထားတာဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြခဲ့တယ်။ ခံတက်ပင် ဖတ်လျှင် ဂဒတ်ပင်ဟုအသံထွက်ပါတယ်။ ခံတက်ချဉ်တို့စရာအဖြစ် လူသိများပါတယ်။ အပင်အမျိူးအစားမှာ အပင်ကြီးမျိုးနွယ်ဖြစ်ပြီးအရွက်မှာ
ရာဘာရွက်နှင့်အတော်တူပါတယ် ။ တပုံစံထဲပါ။ အပင်အောက်ခြေမှာ ပင်ပွားများပေါက်နေတတ်ပါတယ်။ အမြစ်ကို တူးယူ၍စိုက်လျှင်အပင်ရှင်ပါတယ်။ ရန်ကုန်တိုင်းနှင့်ဧရာဝတီတိုင်းမှာ ပေါများစွာ ပေါက်ရောက်ပါတယ်။ ခံတက်ခေါက်လို့ရေးထားတာက ခံတက်အပင်၏အခေါက်ကို ဆိုလိုပါတယ်။ ဆေအညွန်းမှာ ခံတက်ခေါက်ကို အကြမ်းပန်ကန်တဝက်ခန့် ရအောင်သွေး၍ သံပုရာသီးတစ်လုံးညစ်ထဲ့၍သောက်ပါ။
ရောဂါအနုအရင့်ကိုကြည့်၍ ချိန်သောက်ပါ။ ပိုသောက်၍လည်းအန္တရာယ်မရှိပါ။ ကိုယ်ခန္ဓာဖောရောင်ခြင်းကိုလည်း သွေးသောက်ခြင်း သွေးလိမ်းခြင်းတို့ဖြင့် သက်သာပျောက်ကင်းနိုင်ပါတယ်။ ခံတက်ပင်ကို ခြံဝင်းအတွင်းစိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့် အတိတ်နမိတ်အရ စီးပွားတတ်စေပါတယ်ရှင်။ လူသားတွေ အားလုံး ရောဂါဘယ ကင်းဝေးစေဖို့ ဆေးနည်းကောင်းလေး မျှဝေပေးလိုက်တာပါ။
ကှမျးယာစားသူရော ကှမျးဟာမစားသူတှအေတှကျပါ ရညျရှယျပွီး ဒီဆေးနညျးလေး ပွနျလညျမြှဝပေါရစေ။ ကိုယျတှပြေ့ောကျကငျးသူရဲ့ ပွောပွခကျြအရ ဆေးနညျးကကောငျးတယျ ဆေးအနနေဲ့က လှယျကူတယျ။ စဈကိုငျးမွို့ရှာထောငျမီးရထားရပျကှကျက ကိုစိုးပိုငျဆံသ ဆိုရငျ မသိသူ နညျးပါးပါမယျ သူကိုယျတိုငျကလညျး ဗမာဆေးကို တစိုကျမတျမတျဖျောစပျနသေူတဈဦးပါ။
ဆေးဝါးကုသတာ ဝါသနာထုံသူမို့ ကြောကျကပျကြောကျတညျသူ ကိုကြျောသူရဲ့ကိုယျတှေ့ ကြောကျကပျကြောကျတညျခွငျးမှ ခံစားခံရတဲ့ဒုက်ခကနေ သကျသာခဲ့တဲ့ဆေးနညျးလေး လာရောကျမြှဝပေေးခဲ့ပါတယျ ။ ခံတကျခေါကျနှငျ့ဗမာသံပုရာသီးအစဈ ကို အရညျညှဈပွီး စတီးဇှနျး တဈဇှနျးစာသှေးသောကျပါ ဆီးကနေ … ! ကြောကျ ကွှကေလြာတာ၃လုံးခနျ ရကွောငျး
အကွီးဆုံးကြောကျကို ဆေးနညျးပွောရအောငျ သိမျးဆညျးထားတာဖွဈကွောငျး ရှငျးပွခဲ့တယျ။ ခံတကျပငျ ဖတျလြှငျ ဂဒတျပငျဟုအသံထှကျပါတယျ။ ခံတကျခဉျြတို့စရာအဖွဈ လူသိမြားပါတယျ။ အပငျအမြိူးအစားမှာ အပငျကွီးမြိုးနှယျဖွဈပွီးအရှကျမှာ ရာဘာရှကျနှငျ့အတျောတူပါတယျ ။ တပုံစံထဲပါ။ အပငျအောကျခွမှော ပငျပှားမြားပေါကျနတေတျပါတယျ။ အမွဈကို
တူးယူ၍စိုကျလြှငျအပငျရှငျပါတယျ။ ရနျကုနျတိုငျးနှငျ့ဧရာဝတီတိုငျးမှာ ပေါမြားစှာ ပေါကျရောကျပါတယျ။ ခံတကျခေါကျလို့ရေးထားတာက ခံတကျအပငျ၏အခေါကျကို ဆိုလိုပါတယျ။ ဆအေညှနျးမှာ ခံတကျခေါကျကို အကွမျးပနျကနျတဝကျခနျ့ ရအောငျသှေး၍ သံပုရာသီးတဈလုံးညဈထဲ့၍သောကျပါ။ ရောဂါအနုအရငျ့ကိုကွညျ့၍ ခြိနျသောကျပါ။ ပိုသောကျ၍လညျးအန်တရာယျမရှိပါ။
ကိုယျခန်ဓာဖောရောငျခွငျးကိုလညျး သှေးသောကျခွငျး သှေးလိမျးခွငျးတို့ဖွငျ့ သကျသာပြောကျကငျးနိုငျပါတယျ။ ခံတကျပငျကို ခွံဝငျးအတှငျးစိုကျပြိုးခွငျးဖွငျ့ အတိတျနမိတျအရ စီးပှားတတျစပေါတယျရှငျ။ လူသားတှေ အားလုံး ရောဂါဘယ ကငျးဝေးစဖေို့ ဆေးနညျးကောငျးလေး မြှဝပေေးလိုကျတာပါ။
Previous PostPrevious သုံးနှစ်သုံးမိုး အမြဲကိုက်နေတဲ့ ခြေထောက် ဒီဆေးနည်းနဲ့ တွေ့မှ ပျောက်တော့တယ်
Next PostNext မနက်က ရွှေတိဂုံ ဘုရားအနီး ကြက်သီးထဖွယ်မြင်ကွင်းတစ်ခု